HR Assistant တစ်ယောက်ဖြစ်လာခြင်း - Ornela သည်သူမကိုယ်သူမအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနာဂတ်အသစ်ကိုမည်သို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သနည်း
Posted by ကို Tranquillus | ဖေဖော်ဝါရီလ 24, 2021 | web ပေါ်မှာ
Rungis အနီးတွင်နေထိုင်သောတက်ကြွလှုပ်ရှားသော ၃၃ နှစ်အရွယ်မိခင် Ornela သည်တစ်နှစ်အတွင်း Job Seeker မှ HR Assistant သို့မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သနည်း။ IFOCOP မှသူ၏ဒီပလိုမာကိုရရှိပြီးသူနှင့်သူ၏မိသားစုဘဝကိုဘဏ္inာရေးအရအရှက်မကွဲစေဘဲစီမံခန့်ခွဲနေစဉ်အားလုံး? အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့သူ့ကိုမေးခွန်းမေးရန်ဖြစ်သည်။
Ornela, သင်ဤနှစ်ကိုအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စတင်နေကြသည်, ဒီအင်တာဗျူး၏အချိန်မှာသင်ရုံ HR လက်ထောက်အဖြစ်အလုပ်တစ်ခုဆိုက်ရောက်ပြီ!
တကယ်တော့ငါအရမ်းပျော်တယ် (အပြုံး) ။ ဤအချက်ကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြင့်စတင်ခြင်းအားဖြင့်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟူသောယုံကြည်ချက်ကိုသာအားဖြည့်စေသည်။
IFOCOP နှင့်သင် HR Assistant သင်တန်းကိုသင်လိုက်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်စကြဝuniverseာကြီးကခင်ဗျားဆီကလာတာလဲ ပြီးတော့မင်းရဲ့ကန ဦး လေ့ကျင့်ရေးလမ်းကြောင်းကဘာလဲ။
ငါကန ဦး ခရီးသွားကဏ္inမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတယ် ကျွန်ုပ်၏အထွေထွေ BAC အပြီးတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအရောင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတွင် BTS ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝအပြောင်းအလဲကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဇာတိနော်မန်ဒီအားပဲရစ်ဒေသသို့စွန့်ခွာရန်ကံမကောင်းကြောင်းအတည်ပြုရန်အခွင့်အရေးမရခဲ့ပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးအရေးတကြီးအဘို့အအလုပ်ရှာထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်
HR Assistant တစ်ယောက်ဖြစ်လာခြင်း - Ornela သည်သူမကိုယ်သူမအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနာဂတ်အသစ်ကိုမည်သို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သနည်း ဇူလိုင်လ 10th, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်များကို လူငယ်များ သတိပြုမိစေရန်
လွန်ခဲ့သောBDES မရှိခြင်း - ထုတ်ပယ်ခြင်း၏အကြောင်းတရားလား
လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်များကို လူငယ်များ သတိပြုမိစေရန်
စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏အခြေခံများ - ဆက်သွယ်ရေး
ခရစ်စမတ်၊ နှစ်သစ်ကူး - မင်းအလုပ်ရှင်ကမင်းကိုမင်းကိုအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေနိုင်သလား။
ထိထိရောက်ရောက်စတင်ပါ (၅) ယူရို (၁/၃)